သွေးအေးအေး စစ်ပွဲတွေနဲ့ ငါတုို့တွေ
သူ စေရာသွား မဟုတ်ပေမယ့်
သူ့ ခြေရာများ အနောက်မှာ
The Story of Dead Romeo
feel free to take my heart with you away
without you it's super hard to pass my day
with the innocent look u r like juliet from the play
touch dead romeo heart to let him alive again...
without the twinkle stars the sky is empty
which looks like my world without u babe
there is only one hope for me to meet u daily
the time being with u make me going crazy...
use ur real eyes to realize the real lies
sudden kinds of ur smile make my heart stop forawhile
don't blame me for greedy i'm juz want ur everythings
don't think that i'm so jealousy, it's juz fear of losing u only...
you areagirl beautiful like an angel
andaguiding star wipe away my trouble
you got the power to take down my heart
and u also know how to lift it back up...
staying beside u to feel your heart beating
it's too complicated to know for whom ur heart is beating
being the last jerk for u is just in imagination
i have no word to prove that i'm notadrama king...
"U VUl OHW 3NO 3HT"
ကာရံမညီတဲ့ ချစ်ခြင်းဖွဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့
July မုိုးလုို မစဲပါလားကွယ်...
ကျနော့်ကို ချစ်ပါ လွမ်းပါ
ချစ်လာမဲ့ရက်ကိုပဲ စောင့်မျှော်ရတာပေါ့...
တခန်းရပ် ပြဇာတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါ
တချိန်က ' _ '
မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တရေးအိပ်
အရေးမပေးခဲ့တဲ့ တချိန်က ' _ '
နှုတ်ဖျားနဲ့ ပြောတဲ့ "ချစ်တယ်" ဆိုတဲ့စကားကတော့
ကျနော့်အတွက် နားဝင်အချိုဆုံး ယုံတန်းစကားပါပဲ...
'_' စကားတွေနဲ့ ကျနော့်ကို
မနက်ဖြန်များစွာကို စောင့်မျှော်ရင်း
ဒီနေ့မှာတော့ ဂျိုကာ ငိုနေသည်...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လျှောက်ဖို့ပါပဲ
ဖြတ်လျှောက်သွားခဲ့တဲ့ လမ်းတွေကတော့
အဝေးရောက် Valentine ကတော့
ဒီအဝေးရောက် Valentine ကတော့
တွေ့ မှထုတ်သုံးဖြစ်တဲ့ အပြုံးတွေဟာ
ကျနော်က ခေါင်းနဲ့ ပန်းကို ပုိုင်ဆုိုင်ခွင့်မရှိသူပါ
ရေရာမှုကင်းမဲ့တဲ့ လူကြီးရဲ့ ဘ၀ကတော့
ဒါမှမဟုတ် အတိတ်ရဲ့ အရိပ်တွေထင်ဟပ်နေခြင်းလား???
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့တွေ့တဲ့အိပ်မက်ကို မဆုံးတမ်းမက်ချင်တယ်...
ကျနော် ပျော်မွေ့ ဖူးတယ်
သူ့ရဲ့ အမိန့်ကိုနာခံဖုို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ...
လမင်းရဲ့ သံစဉ် ကြယ်စင်ရဲ့ တေးတွား
အပြုံးတခက်နဲ့ လျှို့ ၀ှက်တတ်တဲ့မျက်လှည့်ဆရာလား
အနာဂါတ်တွေကိုတွက်တဲ့ Tarot ဖဲချက်တွေလား
အဖြူရောင်ကိုပဲ ရိုးရိုးစင်းစင်း ချစ်ခဲ့ခြင်းပါ...
မင်းနဲ့ မပေါင်းဖက်လုိုက်ရမှာကိုပဲ ကြောက်မိတာပါ...
အလဲလှယ်ခံရတဲ့ နှလုံးသားကုို ငဲ့ညာလုို့
ငါ့ရဲ့ အလွမ်းတွေနဲ့ သက်သေထူမယ်
အဘိဓာန်ထဲက "မုန်း" ဆိုတဲ့စကားလုံးကို
ကြိုးကြိုးစားစား လျှောက်လှမ်းနေသူပါ..
လူမလေး ခွေးမခန့်တာကိုတော့ နာတယ်...
ပဉ္စမမြောက်အပိုဒ်ကတော့ စာရေးစရာ မင်းခုိုက်စိုးစံရဲ့ အတွေးတစ်ခုပါ... သဘောကျမိတာကတကြောင်း ဒီကဗျာကိုဖတ်တဲ့သူတွေကို ရသတခုပေးခြင်တာကြောင့် ထည့်သုံးခဲ့တာပါ....
လွန်ဆွဲတယ်ဆုိုတာ စည်းတားထားတဲ့မျဉ်းနဲ့ အဝေးဆုံးကိုရောက်နုိုင်သူက အနိုင်ပါ... ဘ၀မှာတော့ စည်းတားထားတဲ့မျဉ်းကို ရောက်တဲ့သူက ပန်းတုိုင်ကိရောက်တဲ့သူပေါ့ တနည်းပြောရရင် အနုိုင်ရသူပေါ့... အဲ့လောက်ဆို စာဖတ်သူတွေနားလည်လိမ့်မယ်လုို့ ယုံကြည်ပါတယ်...
P.S. ရှင်းလင်းချက်ဆိုတာ ရှုတ်မသွားအောင်ပါ... ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ပြီးမှ ပိုရှုတ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်...
၂၄ နာရီကို အခက်အခဲများစွာနဲ့
i dreamed of u for many times
u r waving ur hand and saying GoodBye
i thought u can always be mine
no matter how hard i will be ur valentine...
fill up my emptiness with ur happiness
my heart is feeling sick of loneliness
i can't live without u is obvious
for u, my love is full of forgiveness
i swear i'm falling on you
and the three words are true
"I treasure U"
there is no meaning for night without moon
u r the reason of my life to continue...
the memory of us will still remain in the rain
the melody of love will play without any pain
for more than century our love will not change
right under my left chest, i will putatattoo of ur name...
i took u for granted and broke my promise
makingamistake which u can't forgive
let me wipe away ur hate by giving uakiss
without u, there is no meaning for me to live...
ဖန်ခွက်ထဲငဲ့လုို့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့
ငါ့ရဲ့ မနက်စာ ကော်ဖီအဖြစ်သောက်သုံးနေတယ်...
အေးမျှတဲ့ အတူရှိခဲ့တဲ့ညတွေမှာ
ကို့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါ ဆုံးရှုံးတတ်တယ်...
ဒါပေမယ့် ငါက မဖြေသာနုိုင်သေးဘူး...
ဒါပေမယ့် ငါက ၀လုံးကိုဝုိုင်းအောင်
ဝေခွဲမရတဲ့ အနာဂတ်ကတော့ မျက်ရေတွေစို့လုို့...
ငါ့ရဲ့ဘ၀ထဲကို ၀င် ထွက်ခွင့်များ
ငါနေခဲ့တာ ၃ နှစ်ကြော်ခဲ့ပြီ
အလွမ်းဆုိုတာက လျှာနဲ့ခံစားတာမှမဟုတ်ပဲ...
this has beenahell week
including the weekends, my days are sick
unpretendable feelings are dropping so deep
day by day i realized tat i had becomeadead meat...
Time is moving too slow to meet each other
but it will pass likealight ray when we are together
Girl, i wish i can let ur chin to rest on my shoulder
after grabbing ur hand, i came to know the meaning of forever...
life is notamovie clip cuz there is no ending
the days of being in here are likeaday dreaming
the smile beneath ur mask make me disgusting
cuz of the cruel ppl the surrounding is bleeding...
nobody will care about us as we are not popular
a simple love always emerge from the heart not from formula
without you tomorrow will not beasweet december
Can i pass the december by tearing the 2011 calendar...
"The One Who Love U"
ငါ့ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို ဖြိုခွဲ
ကျေားခင်းလို့ နေနဲ့လတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုအားကျမိတယ်...
မမြင်မကမ်း လျှောက်လှမ်းနေတဲ့
မင်းရဲ့ အချစ်တွေက ဖြူစင်တော့လည်း
ကမ္ဘာရဲ့ တစ်ဖက်ကို လွင့်စင်သွားခဲ့ပြီ...
မင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုစိတ်နဲ့ နှစ်ကိုယ်ခွဲခဲ့ပြီ...
၀ှက်ဖဲမတွေ့ပဲ လောကကြီးကို အရှုံးပေးခဲ့တဲံ
သစ်ရွက်တွေ ကြယ်လေးတွေ ကြွေဖုို့
ချိုမြိန်ခြင်းရဲ့ ပန်းတိုင်က ခါးသက်ခြင်းလား...
မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ မနက်ဖြန်တွေကို
my feelings were influenced by the lonely
sometimes which makes me weary
it's hard to survive without u, daddy
juz want to go bak to the time living with family...
i lied to Mom when they asked "How are you?"
i put on my smile and tell her "i'm always cool..."
nobody knows that i'm floating on the sadness pool
which place can be better than living together with you...
everything is moving like nothing is sick
but the world has possessedafull of trick
it's too complicated for us to go and think about it
and dudes, i'm not the ball for u to kick...
before we meet, we are juz an unknown person like other
but now we share our love and promoted into lover
giving uabear hug and let u sleep peacefully on my shoulder
tho our loves are real, it's still difficult to predict our future...
the time without them are 24/7, my everything is broken
the past time with time can't be forgotten which is likeaheaven
i will pretend to be happy like no worries but inside is burnt
learn from mistake as no one is perfect and prepare to be ready for ur turn to come
"because everyone can not always be one!!!"
"The One Who Luv U"
my tomorrow are still making me lame
Girl, u r rite.. i'm totally lack of brain
but i can tell u tat i will nvr forget ur name...
i forgot to care u when u r with me
and also dunt know what is happening
everythings are seem to be fading away
as the times are moving day by day...
my friends told me that i'maplayboy
but Girl, i juz trying to be ur special guy
all of my words to u are notalies
wipe out ur tears and give meahoney smile...
still willing for the time we can meet
and i'm missing the touch of ur lips
still want to huv ur wonderful kiss
which had made me forgot to breathe...
i need u like no one do
as i'm always true to u
i miss u like everything is fool
in this world nth can compare to u
Girl, with all of my heart I LOVE U...
မျှော်လင့်ချက်တွေ အရောင်ပျယ်ခဲ့ပြီ...
Tomorrow will come by itself
without interrupting anything
but today is broken silently
until the sun set to the west...
"What is Life" they dunt bother
cuz they are not facingatrouble
but one day they all will huv to suffer
cuz we all are living in the cycle...
the room is filled with loneliness
so down to get out from sadness moment
sacrifice myself to challenge the endless match
the bloody life got the magic to dispel my confidence...
pretend to be matured is one of human activities
as we know tat life is full of possibilities
under the unfair earth, all are virtualities
so, the things we do are juz temporaries...
We are all innocence in our child age
cried, smiled and passed the simple date
everything had changed by the stupid fate
please give us some spaces by wiping away the hate...
Seems like love had changed to different form
living with the lonely things make every single day down
without u beside me is likeasummer withoutasong
these things are fading away when u were found...
nobody can know what is happening inside my heart
but Girl, u know that i am loving u from the start
there isarule of the earth which is nth can last
but Girl, i can last for u cuz my love is beyond
the rule of the earth...
i keep on asking myself about how much i can love
my every thought is feeling pity on Romeo & Juliet
my every single beat is following the beat of ur heart
after knowing u, i came to realize that
u r part of my life...
making our love strong by binding two souls into one
i'll always be ur man no matter how hard does the thing come
under the uncertain time, the only thing i want is to hold ur hand
in an unpredictable time, i hope we will huv full of fun...
the love which grows in my heart is all for you
disappearance of u is like u r testing how much i miss u
long term relationship can make ourselves likeafool
until tomorrow and tomorrow my love will be always true for u
and some more i deadly need u...
ပျော်မွေ့ ခြင်းတွေ များစွာနဲ့
နေအတွက် ကမ္ဘာက ဖြစ်တည်နေတာလား?
Thou i was surrounded byamillion people
but i'm still lonely when you are not here
my love is likeawhite cloud which is pure
nothing is real when u r not near me…
distance between us is juzakilometer
another year will be added by 19 september
forget all the pains to stand beyond the hate border
by loving u i promote myself asasurrender...
Smile plus ur beauty are precious
only you can replace my emptiness
the time i spent with u are priceless
in this round earth, u r the only princess...
my thought was floating on the endless sky
like the twinkle stars far away from million miles
u can trust me for not saying u goodbye
cuz my days were made up with your beautiful smile...
as we are far away, i feels like we are still together
many people said that nothing last forever
but we still can pass this september together
and our eternity 19 will be last forever and ever...
with u i came to know what is trust
i dun care anyone talking bad about us
as long as u r still keeping me in ur heart
thanks u for giving meachance to know what is love…..
Days are coming quietly
and nites swift silently
my heart is likeafearless child...
the tears are flowing to the ground
when ur beautiful shoulder is not around
i wish i can be part of ur song
without you my days are very long...
loneliness has beenagood friend of mine
my white guitar is playedalonesome rhyme
our memories are flattered on the blue sky
by stealing ur heart, i had committed the love crime...
missing u is likeakind of disease
which can nvr be killed by antibiotic
loving u is likeakind of fever
which can nvr be cured by doctor...
almost 365 days that we are away
monthly nineteen is our anniversary day
September rain will wash the pain and fear
we had been fallen on each other for7years....
fill up the gap between us by MISS
treat my dry lips with ur comfortable KISS
feed my love to u likeatiny creep
only left uncountable day & nite for us to MEET...
ငါ့အရှုံးအတွက် (ခင်းဗျားတို့) ပျော်ကြပေါ့
မနက်ဖြန်တွေကို (ငါက) ပြုံးပြီးကြိုနေမယ်
ငါ့ရဲ့ စက္ကန့်သံ မရပ်မခြင်းပေါ့...
မပိုခဲ့ပါဘူး (ခင်းဗျားတို့) စကားတွေ
မမှားခဲ့ပါဘူး လူတွေက (ခင်းဗျားတို့အပါအ၀င်)
(လူတွေနဲ့) အမြင်မတူတဲ့ အပြင်လူအဖြစ်နဲ့ ငါကမှားတာပါ...
Villain မပါ မင်းသမီးမပါခဲ့ပါဘူး
သနားစရာမကောင်းတဲ့ Gypzy ရဲ့ရင်ဖွင့်ချက်ကို
you can just leave me like yesterday
when you have no much to say
i will findasong for you to play...
ur boredom lead us play the heart broken game
the grey sky greets us with the tender rain
the feeling of your touch dissolve in the vein
should i blame u for not remember my name...
the more i put my love into it, the more pain i suffer
with these kinds of pain i feel like i'm so paper
the taste of ur smile is likeasweet butter
but the smile tat u give me are always beyond the expired...
i keep the promises that you gave me last night
i haveatattoo which i got it from our last fight
grabbing ur hand and talking about love until the sun bright
i didn't expect that you will break the promises and leave my life...
i makeajoke of myself for you to laugh
hardly believe that the joke will make u disgust
i hide my tear and pretend to smile with my broken heart
how dare u told that my love can nvr be trust...
i makeawish during the sun and moon meet
pass my days happily with ur broken promises
why u open ur eyes wide when i kiss ur lips
i love u anyway, my sweetest sweet...
time passes from year to year
our duty is to pass it without fear
try to build our real and better friendship
and welcome our New Year Breeze...
leave the bad things wit two thousand ten
juz bring bak our friendship to two thousand eleven
our memorial time will still be there
as the future fate we can nvr tell...
countin down to cheer for New Year
but u r not here wit us in tis year
our new year tend to deaf without joker
there is nth which is able to be stable...
Wish the New Year will bring the happiness
Wish the old Sun can gives usawarm light
Wish all of my friends can receive my pure smile thru tis poem
And also hope to receive ur beautiful smile asawonderful comment....
ငါ့အနားမှာ မင်းအတွက် တနေရာချန်ထားဆဲ...
ငါ့ရဲ့ အတွေးကို ဖျက်ဆီးတယ်...
လကိုကြည့်လို့ဆွေး ဘာတွေတွေးနေမှန်း မသိ
ယောင်ချာချာနဲ့ ငါရောက်နေတဲ့ ၀င်္ကပါ
ကမ္ဘာမြေကြီး တည်နေသရွေ့ တည်ရှိနေမှာ...﻿
for knowin u more thanayear
u r still think me likealiar
i'm not ta one who lights up the fire
juz wanna hear tat i'm ur admirer...
Yesterday wasa3rd December
My heart was stunned byasweet smiler
accidently met u in Lucky Plaza
dunt wanna think tat u r the heart breaker...
nvr thought tat it will hurt u
cheated u is not to make u fool
still dunt know wat i huv done to u
always try to be true on u...
for all the luv tat my heart is make
it's juz only for u to take
even fate can't change my heart to replace
So, dunt try to change ur smiley face...
My Tears are droppin
My earth is cryin
My mind is dyin
but My Bleedin heart is still luvin
juz for u i am still livin...
မင်းလိုပဲ ပေးဆပ်တာပဲ ကောင်းမယ်ထင်တယ်...
U r mine မဖြစ်နိုင်ရင်တောင်
I'm always Urs ပါပဲ...
လူတွေမယုံတဲ့ ဗီလိန်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်မှ
December will turn back again
i wish i could meet u forawhile
Day & Night i miss ur smile
11:11 can't make me forget our time
juz keep on makingabeautiful rhyme
if there is no u, i will die...
Bind our two souls together
i hope we can be forever
making our luv for better
counting the stars fallin to the earth shoulder
lying on the bed and missin u ever
keepin the promise on nvr leave each other...
I wish i'm the best for u
as u r so special to me
all of the words i told u is true
i believe tat u will not make me fool
juz want to hear tat u luv me too
without u i'm so blue...
i felt lonely when u r not around
juz give me some happiness and u r gone
dunt leave me withabeautiful song
there is no girl like 'u' in the world now
pls luv me few and luv me long
without u i'm so down...
ta luvly girl from yesterday
u took my breath away
u make me think of u until today
unforgotten smile guide my way...
counting down ta smile u brought to my eye
my heart stopped beatin when our eyes meet for awhile
if u wereatwinkle star i will be the whole sky
if u wereamoon i will be your only sun...
missing u likeamad until now what i get
u may think i'm fool tis all are cuz of u
if there is no luv, the world will end
for me if u dunt luv, my life will suck...
the first time we met tat'sapretty monday
before i met u my monday isablind day
give meastrength to wipe out my lonely day
for meeting u again i will pray...
မင်းစကားနဲ့ အသက်ရှင်ချင်တယ် ..
Facebook ထဲမှာ ပေါ်ပြူလာ
Is it ur order to make me stressed in work
i wont blame anyone n make myself cry out
cuz i luv my life n still huv many things to work out
anyway thx for makin me strong for survivin in tis bloody environment...
is it ur order to make me stay away from her too
i wont blame anyone n make myself fool
cuz i know wat is love n wat is life now
anyway thx for letting me know without her i'm totally down...
is it ur order to ask someone to break my heart
i wont blame her. i will juz smile to her
i dunt huv the heart to break cuz i gave it to my lovest one
anyway thx for letting me know how to break the heart...
is it ur order to kill my life and luv
i wont blame anyone even feeling so bad
cuz i know tat there is no end in true luv
anyway thx for letting me know even no life the luv can still survive...
is it ur order to ask my parents to make me go abroad
i blamed them one time and my life became out of control
cuz i was punished by the fate and i became to hate my every date
i'm truly thx for letting me know how parents luv their children...
Good Morning ဆိုတဲ့စာလေးတွေက
ကောင်းကင်နဲ့ မြေပြင် အကြည်စိုက်နေကြတယ်...
ငါ့ရဲ့ ရင်မှာ အပူတွေစု...
feels like every touches are still alive
Girl u r the only one tat i evr had
i am still missin the beautiful nite
for leaving u, i was punished by my luv...
feels like everything's are still the same
by the time our eyes meet again
i huvareason for breakin up
but u r still the number one in my heart...
seems like my heart is still wit u
and the only word to u, my luv is true
i had left u but it still hurt me hard
tis is the only thing tat i deserved...
my nightmare date store my happiness
replace wit ta sadness like it will nvr left
luv is likeastring it can be2pieces
the both ends will hurt when it was cut
in order to luv u long i want to be strong
my everywhere are full wit the smell of ur hair
witin tis surroundin how can i stop luvin
i came to know tat sayin goodbye is ta hardest thing...
Bye word for u is
Beloved You are Eternity...
uncountable days are gone
wat is the meaning of i was born
the bloody things make me alone
my heart is bleeding n u leave it torn
u will be happy when u see my wound...
i know tat u r away in thousand miles
the birds are wakin me up from the beautiful sky
i always believe ur words even u lie
my luvs are blind when i see ur smile...
i hate the fate which will make us to break
i will kill the fate so we can be together in one place
dunt believe the fate and stab my heart witablade
cuz u r the only one who i can't replace
how to live without u in the earth
i still luvin u even u broke my heart
my romantic thought will end to death
but i still missin the time we met...
Yesterday, i was wit u in my dream
i went to the place tat i had nvr been
n want to convert my life to live in the dream
"i can't help luvin u" is the word tat u will seen
some ppl will think i'm so emotion...
My heart sent uamsg to forgive
without u my love will be dead romantic
i am seekin u in all the place as u did
i am so weak cuz without u i can't live
My heart will still beating until we meet...
if can't be ur lover...
let me be ur favorite hello and urs hardest goodbye...
စက္ကန့်မျှ ရိုက်ချက်ကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာများ
ဒီကမ္ဘာမှာ မွေးဖွားပြီလား ???
ငါ့ရင်ကို ဓားနဲ့ မွန်းနေသလိုပဲ
ငါသွေးနဲ့ ရေးတဲ့စာကို ဖတ်ချင်လို့လား...
ငါ့အိပ်မက်က အဲ့လောက် မလှနိုင်လို့ပဲ...
TEARS & RAIN တဲ့ ငါနားထောင်နေတယ်
အပြင်နဲ့ အထဲမှာလဲ မိုးတွေရွာလို့
အခုတော့ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေပြီ
"ချစ်တိုင်းလဲ မညား" ဆိုတဲ့စကားက
အေးအတူ ပူအမျှ ပျော်ရွင်ခဲ့တဲ့ငါတဲ့ဘ၀
၅၂၈ဆိုတဲ့ မောင်နှမမေတ္တာ သင်္ကေတ
before we meet each other,
we live our life asastranger
after we know each other,
we make the same life together...
i used to make u smile
cuz i wanna see ur beautiful eye
u used to make me cry cuz
u want me to miss u everytime...
if i huvachance to say,
i will luv u all ta way
if u want to leave me away,
i will try to end my day...
As for ta whole world, i maybzero
but for u i will always be ur hero...
As ta time go, u willbold
but for me u will always be my babe doll...
the only thing tat u make,
my whole world is full of hate
nth can make us break
u will nvr be replaced...
evryth will be fine
as long as u r mine
the only thing i will not lie
i will nvr say goodbye...
The One Who Luv U
အချစ်ဆိုတာဘဘာလဲ... တညလုံး စဉ်းစားရင် မနက်မိုးလင်းသွားတယ်...
ဘ၀ဆိုတာကရောဘာလဲ... လူမှန်းသိတတ်တဲ့အရယ်က ဒီအချိန်အထိပါပဲ...
အချစ်ကို တချို့က ပေးဆပ်ခြင်း... ရယူခြင်း... တချို့တချို့က ပူလောင်တဲ့ မီးတဲ့...
မီးဆိုတဲ့အရာက ကိုင်တွယ်တတ်ရင် အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာပါပဲ... ဗရမ်းဗတာနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ အရာပေါ့...
အဲ့ဒါကို သိရက်နဲ့ ဘာလို့ ဝေးဝေးမနေနိုင်ကြတာလဲ???
မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း... မသိမကောင်း သိမကောင်း... တခါတလေတော့လည်း ငါ့ကိုငါ သုံးသပ်မိတယ်... ငါရူးများရူးနေလား...
တာရာမင်းဝေကပြောတယ်... "လူဆိုတာ ပုထုဇဉ်ရထားလက်မှတ်ရတားတဲ့ အရူးတွေပဲတဲ့..."
ရည်မှန်းချက်တစ်ခုနဲ့ ဘ၀ကို အသက်ရှင်တယ်... ဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်ဖြစ်ခဲ့ရင် နောက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရောက်ရောက်လာတယ်...
အဲ့ဒါတွေကို ဖြည့်ဆည်းရင်း လူ့သက်တန်းရဲ့ အားအင်ကုန်တဲ့အထိ ကြိုးစားကြတယ်...
အချစ်ဆိုတာက လူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြား ပျော်တော်ဆက်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုလား...
ပန်းပင်လေးတစ်ပင်စိုက်ရင် တနေ့မှာ ပန်းပွင့်တွေကို မြင်ရမယ်... ဘာပန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုစိုက်လို့ ပန်းပွင့်လာရင် ပီတိဖြစ်တဲ့ ပျော်ရွင်တယ်...
ပန်းဆိုတဲ့အရာက နူးညံ့တယ် အချိန်တန်မှ ခူးလို့ရတယ်... အချိန်လွန်လို့ မြေပေါ် ခခဲ့ရင်လည်း ပန်းကလေးရဲ့ ဘ၀က သနားစရာလေးပဲ...
အချစ်ဆိုတာကို ပန်းလို့ ရိုးရှင်းစွာ သတ်မှတ်ကြည့်မယ်.... လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင် သူ့ကို ချစ်တတ်လာအောင် ပျိုးထောင်ပေးရတယ်...
ချစ်တတ်လာတဲ့ အချိန်ရောက်ရင် ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ လူအတွက်တော့ ပျော်စရာ ကြီးပေါ့... နှလုံးသား ပန်းဥယာဉ်မှ အကြင်နာပန်း နှလုံးသားပန်းတွေဝေးစာလို့....
တခါတလေတော့လေး ပျိုးထောင်ပေးလိုက်တဲ့ လူအတွက် ပန်းကလေး ကြည့်ရင် မခူးရက်ခဲ့ဘူး... ပန်းက အရမ်းကို လှနေလို့ပါပဲ...
အချစ်တစ်ခုနဲ့ မလုံလောက်ဘူး... အချစ်ရဲ့ မယားညီအစ်ကိုခေါ်မလား... မဟုတ်ဘူး အချစ်ရဲ့ ဖွားဖက်တော်ဆိုရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ်... အဲ့ဒီအရာက အမုန်းပါပဲ...
အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ပေါက်ဖွားတယ် ကြီးထွားလာတယ်... သိပ်ဝမ်းမသာနဲ့ အမုန်းဆိုတာကလဲ အချစ်နဲ့ တန်းတူ ကြီးထွားလာတာပဲ...
အချစ်မှာ အတ္တနဲ့ ရမ္မက်ရှိတယ်... အမုန်းမှာတော့ ရေတွက်လို့မရတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတယ်... သစ္စာဆိုတဲ့အရာကတော့ အခုခေတ်လူတွေအတွက် ဒိုင်ယာရီထဲမှာတောင်မပါတော့ဘူး...
လူမပြောနဲ့ အရမ်းသခင်ကို သိတတ်တဲ့ ခွေး သတ္တ၀ါမှာတောင် မြေလှန်ရှာမှ တွေ့လိမ့်မယ်...
ဒါဆို အချစ်ဆိုတာ နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ခေတ်မဆန်တဲ့ အချစ်နဲ့ ခေတ်လွန်အချစ်...
ခေတ်မဆန်တဲ့ အချစ်က ချစ်စရာကောင်းတယ်... ဘယ်တော့မှလဲ မရိုးဘူး... သူတို့လက်ကိုင်ထားတာက သစ္စာတရား အကြင်နာတရား ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေပါ့...
ခေတ်လွန်တဲ့ အချစ်ကရော အချိန်အတိုင်းတာတခုတဲ့ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်... ရိုးတတ်လားဆိုရင်တော့ စာဖတ်လူတွေပိုသိမှာပေါ့.... သူတို့လက်ကိုင်ထားတာကတော့ အတ္တတွေ
မာန်မာနတွေ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ခွင့်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်တဲ့ လျစ်လျူရှုခြင်းတွေပါပဲ...
မနက်မှာနေထွက်လို့ ညမှာနေ၀င်တာ ဓမ္မတာ... နေကြတ်တယ် လကြတ်တယ် ဆိုတာ တိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု... ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာက လည်ပတ်နေဆဲ့ပါ...
ဘ၀ဆိုတာကို ပန်ချီကားတစ်ချပ်လို့ဆိုလိုက်ရင် လူတွေက ပန်းချီးဆရာတွေပေါ့... ပန်းချီဆရာဆိုတာ ပန်းချီရေးခြင်းအလုပ်ကိုဝါသနာအရရော... စီးပွားဖြစ်ပါလုပ်တယ်...
ရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ ပန်းချီရေးတယ်... ဘယ်ပန်းချီဆရာမဆို သူတို့ရဲ့ ပုံကို လှအောင်ရေးဆွဲရတာပဲ... ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘ၀သမားတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ...
တတ်ထားတဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ ရေးဆွဲကြတယ်...
ဘ၀ဆိုတာကို ပြောရရင် မပြောချင်ပါဘူး... ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရန်ကုန်က ကတ္တရာလမ်းတောင် ဆရာခေါ်လို့ရတယ်... ဘ၀အကြောင်းသိပ်မပြောတော့ဘူး...
ကျနော့်နဲ့ ထပ်တူ စာဖတ်သူတွေလဲ စက္ကန့်နဲ့အမျှ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေပဲ...
လူတွေကို မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ လို့ပြောရင်ယုံမလား... ကျနော်က တော့ လက်ခံပါတယ်... ယုံတယ်ဆိုတာ ယုံတာပဲ... လက်ခံတယ်ဆိုတာက ဒေါင့်ဆုံတွေးပြီးမှ ယုံတာ...
အမှန်ပြောရရင် ကျနော်လည်း မျက်နှာဖုံးနဲ့ပဲ... လူမပြောနဲ့ လောကကြီးကတောင် မျက်နှာဖုံးနဲ့...
မင်းခိုက်စိုးစံကပြောတယ် မျက်နှာဖုံးမရှိရင် လူတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါးပါးနေလို့မရဘူးတဲ့ (အရှက်နဲ့ လူလုပ်နေတဲ့ လူအမျိုးအစား)
လူတွေရဲ့ အပြင်အဆင်တွေထက် မျက်နှာဖုံးက အရှက်ကို ပိုကာကွယ်နိုင်တယ်... မကောင်းမှုလုပ်ရင်တောင် မျက်နှာကြည့်မှ မှတ်မိတာမလား....
မျက်နှာဖုံးတတ်ထားရင် အရှက်ရှိစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့.... ဒါဆိုရင် လူဆိုတာ မျက်နှာဖုံးနဲ့လို့ပြောရင် လက်ခံလို့ရလောက်ပြီ...
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ဆင်းရဲခြင်း ချမ်းသားခြင်းတဲ့... ဆင်းရဲတယ် ချမ်းသားတယ်ဆိုတာက အတိတ်ဘ၀က ပေးလိုက်တဲ့ ဘွဲ့ပါပဲ...
ဆင်းရဲတဲ့လူတွေနဲ့ ချမ်းသားတဲ့လူတွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွေကွဲတတ်ကြတယ်... ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကလဲ လူတွေရဲ့ ဆရာတွေပါပဲ...
ဆင်းရဲတဲ့လူတွေက ဆိုးရင် ပတ်ဝန်းကျင်က အဲ့ဒီကေင် ရိုင်းတယ် မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်....
ချမ်းသာတဲ့လူတွေ ဆိုးရင်တော့ ပျော်တတ်တာတဲ့... ကယ် ဘယ်လောက်တရားကျလဲ...
ဆင်းရဲ့တဲ့လူ ချမ်းသာလာရင်တော့ တမျိုး စကားထွက်ပြန်ရော ဒီကောင်ဘယ်က အကူအညီရပြီး ကြီးပွားသွားတာလဲတဲ့....
ချမ်းသာတဲ့လူတွေ ဆင်းရဲသွားရင်တော့ ဒီလူသနားပါတယ် လူလိမ်ခံရတာတဲ့....
ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ဖြစ်တာတဲ့... ဆင်းရဲတဲ့လူ ချမ်းသာတဲ့လူ ဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲစရာမလိုပါဘူး...
အဓိက ကျတာက လူတွေကို အကောင်းမြင်လို့ ကို့လမ်းကိုလျှောက်တာဖို့ပါပဲ...
အချစ်ဆိုတာက ပေးဆပ်ခြင်း မဟုတ်ဘူး... ရယူခြင်းမဟုတ်ဘူး... တဦးပေါ်တဦး နားလည်ခြင်း...
ဘ၀ဆိုတာက ပန်းခင်းထားခြင်းမဟုတ်တဲ့လမ်းတွေပါ.... ဆိုတာ ကောင်းတာ ဒွံတွဲနေစမြဲ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာက ၂၃ ၁/၂ ဒီဂရီ တိမ်းစောင်းပြီး လည်ပတ်ဆဲပါ...
ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဒီခရီးအတူတူသွားနေတဲ့ ခရီးသွား ဧည့်သည်အချင်းချင်း စာနာတတ်ဖို့ပါပဲ
ခရီးတူပေမယ့် ပန်းတိုင်မတူကြဘူးနော်... အချစ်မရှိတဲ့ကမ္ဘာ... အစစ်မရှိတဲ့ကမ္ဘာ... ဘယ်ကမ္ဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်
ရေးချင်ပါသေးတယ်... အရေးအသားမကောင်းတော့ စာဖတ်သူတွေ စိတ်ညစ်နေမယ်...
0 comments Labels: LOV3 Links to this post
နယူတန် နိယာမ မှားနေလားလို့...
0 comments Labels: LiFE Links to this post
The hardest thing between u and me
Believin each other is the most important thing
Cryin in the rain witout someone noticed
But u r still enjoyin the summer breeze...
The moment we meet at the certain place
My heart was stunned by ur smiley face
My eyes were stucked at ur beautiful smile
And only tis smile kill me many times...
The stars are sparkling on the sky
Wit the help of the moon they can freely bright
My heart beats were followed by ur love rhyme
U r the only one who make me still alive...
Wanna drinkacoffee made by u
Without u I dunt know what I huv to do
My bleeding heart is missin u
Evryth is nth in my world without u...
Now my tears are mixin wit the rain
Give meachance to luv u again
Leave me alone like the last train
Dunt treat me likeaSeptember rain...
I can still remember your touch
Can still feel the warmness of ur heart
Why did u break ur promise n make my world mess
Is it important to care the third person in our love????
I used to question & answer myself
until ta day i found u in ta earth
and tat day wasabeautiful Sunday
replaced ur luv and make all ta hate fade away...
broken heart started to beat again
ta bloody earth is wit the full of pain
but i'm still dancin in the rain
dunt want to beavillain in this play...
wake me up wit ur morning kiss
make me sleep wit ur night kiss
fking miss u since the day u leave
ur fake luv broke my heart into pieces..
i dunt know why i'm still missin
freakin things are messin in the vein
breakin heart cant be controlled by the brain
lonely soul will always be the same...
am i ur dead meat or ur tiny creep
i can still get ur smell whenever i breathe
'I LOVE U so much' how to prove it???
freeze my heart by putting it in the fridge
then i will give you asaValentine Gift...
"U VUl OHW 3HO 3HT"
ကွန်ပြူတာကို ကြည့်လို့ မျက်ရည်ကျတယ်
နေမင်းရယ် မင်းအလင်းက ငါ့ကိုပူလှောင်စေတယ်
သူညညဆုတောင်းပေးတဲ့ Sweet Dream နဲ့ဆို
လမင်းရဲ့ အေးမြခြင်းမလိုပဲ ပြည့်စုံနေတယ်...
ချစ်သူရယ်... အိပ်မက်ထဲမှာ ဆုံမယ်
၂၄နဲ့ နှုတ်လိုက်ရင် ၂၃.၉ ဖြစ်နေတယ်
ငါ့အတွက်တော့ ကြာလေ အချစ်တွေတိုးလာလေပဲ...
sometimes i dunt want to care anything
cuz i truly know tat what do u mean to me
juz want to tell u " L O V E"
without u i'm so lonely...